Wasiir ka tirsan Somaliland oo sabab la yaab leh u xaraashay guryahiisa kana soo jeeda Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th May 2018 Ahmed weheliye Gaashaan Af Soomaali 0
Hargeysa ( Mareeg News ) Warar lagu kasloon yahay ayaa sheegaya in Saleebaan Ciise Axmed “Xagla-toosiye” oo ka mid ahaa wasiiradii muuqday ee xukuumaddii Axmed Siilaanyo uu gebi ahaanba xaraashay hantidii ma guurtada aheyd ee uu ku lahaa Hargeysa, sida labo guri oo ugu yiil xaafada Masalaha iyo hanti kale.
Sababta xaraashka hantida Xagla-toosiye ayaa la sheegay inay ka danbeysay inuu dib danbe ugu soo laaban doonin Hargeysa, kuna wajahan yahay dhinaca maamul goboleedka Puntland oo wada hadal hoose u socdeen.
Saleebaan Dagla-toosiye oo kasoo jeeda gobolka Ceyn ee Buhoodle ayaa hadda ku sugan dalka isu-taga Imaaraadka Carrabta, wuxuuna isu diyaarinayaa imaanshahiisa Puntland, iyadoo gurigiii ugu danbeeyay ee uu ka iibsaday Ganacsade Ad-diinle oo ka mid ah tujaarta ka ganacsada daadka.
Warar hoose ayaa sheegaya in Saleebaan uu xil iyo mansab uu ka waayay xukuumadda cusub ee Muuse Biixi, taasoo ku dhalisay inuu caro ka qaado Somaliland oo markii horeba uu xil looga magacaabay ka hor inta uusan aqoonsan.
Waxaa la og-yahay in Saleebaan Xagla-toosiye inuu ka mid ahaa murashaxiintii madaxweyne kuxigeenka Puntland ee sanadkii 2009, markii uu ku hungoobayna uu u abaabulay jabhadda Buhoodle aakhirkiina ku biiray 2012-kii maamulka Somaliland.
Saleebaan Xagla-toosiye ayaa waxa uu mudo dheer horjooge u ahaa Jabhad reer Buuhoodle ah oo dagaal kula jirtay Somaliland waxaanu bishii August 11, 2012 heshiis rasmi ah la galay Xukuumaddii hore ee Kulmiye ee uu hogaamiyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo,iyadoo uu Siilaanyo u magacaabay Wasaaradda Caafimaadka Somaliland taasi oo uu la dhamaystay muddo xileedkii Siilaanyo.
Qoraal uu wariye Soomaaliueed ku qoray bogiisa Twitter-ka oo qalqal amni abuuray